Ọnọdụ teknụzụ maka ịmịpụta Mgbaaka magburu onwe ya
Kedu ihe mgbaaka na-ebu? The agba mgbaaka na-ezo aka enweghị nkebi nchara anwụrụ nke bụ na-ekpo ọkụ-akpọrepu ma ọ bụ oyi-akpọrepu (oyi mmasị) maka n'ichepụta nkịtị Rolling agba mgbanaka. Mpụga dị elu nke ọkpọkọ ígwè bụ 25-180mm, na mgbidi ya bụ 3.5-20mm, enwere ike kewaa int ...
Agaghị ebu mmanụ n’ebughị mmanụ n’Ezie?
Mmanụ na-enweghị mmanụ bụ ụdị ọhụụ a na-ete mmanụ, nke nwere njirimara nke mgbatị ọla na mmanụ na-enweghị mmanụ. Ejiri ngwongwo ígwè na-etinye ya na mmanụ pụrụ iche siri ike. Ọ nwere àgwà nke elu amị ikike, mmetụta na-eguzogide, elu temperatu ...
You maara ihe akụkụ igwe biarin bụ? A na-akpọ ha "nri nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ igwe" ma jiri ya mee ihe n'ọtụtụ akụkụ dị mkpa nke igwe. N'ihi na akụkụ ndị a dị mkpa na-arụ ọrụ n'ebe a na-adịghị ahụ anya, ndị na-abụghị ndị ọkachamara anaghị aghọta ha. Ọtụtụ ndị anaghị arụzi ọrụ ...